मंगलबार नेप्से परिसूचक २१.१६ अंकले ओरालो, सर्वाधिक शेयर कारोबार गर्नेमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक | News Polar
मंगलबार नेप्से परिसूचक २१.१६ अंकले ओरालो, सर्वाधिक शेयर कारोबार गर्नेमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक
काठमाडौं । मंगलबार नेप्से परिसूचक २१.१६ अंकले घटेर २ हजार ६०० विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन २ हजार ६२७.३४ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ५१९.४२ विन्दुसम्म झरेर फेरी उकालो लागेर बन्द भएको हो ।
शेयर कारोबारका ठुला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २.४१ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक ओरालो लागेपनि बजारमा कारोबार रकमको उच्चता भने कायमै रहेको छ ।
मंगलबार पनि रू. ८ अर्ब ५६ करोड १५ लाख ३९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम बराबरको १ करोड ७७ लाख १४ हजार ९१२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो दिन २०५ वटा कम्पनीको ८३ हजार ३५७ पटकको कारोबारमा उल्लेखित शेयर कारोबार भएको हो ।
कारोबारको ७ औं दिनसम्म उच्च मूल्य वृद्धि भएको उक्त कम्पनीको ८ औं दिन मंगलबार भने मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो । यो दिन कम्पनीको शेयरमा उच्च विक्री चाप देखिएपछि मूल्यमा असर परेको हो । सोमवार रू. ६६० कायम भएको कम्पनीको अन्तिम मूल्य मंगलबार प्रतिकित्ता रू.६६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ५९४ मा झरेको छ ।
यसदिन व्यापारिक समूह बाहेकका सबै परिसूचक घटेको छ । व्यापारिक समूहको भने ०.९ प्रतिशतले परिसूचक बढेको हो । यो दिन नेपाल फाइनान्स, अपि पावर, लिवर्टी इनर्जी कम्पनी र हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
यसदिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । यो दिन कम्पनीको रू. ७३ करोड ९४ लाख ५२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको यो दिन कम्पनीको शेयरमूल्य भने सर्वाधिक १० प्रतिशतले घटेको छ ।
# व्यापारिक समूह # मंगलबार नेप्से परिसूचक # नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक # शेयर कारोबार
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७, १६:५०:४२
अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको भाउमा बृद्धि, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले फागुन २३ गतेदेखि आइपिओ निष्काशन गर्दै
यस्तो रहेको छ शुक्रबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर, हेर्नुहोस्